Ungalwa Kanjani Nezinsolo Zobugebengu Bamanga Ezinkantolo Zase-UAE | Umthetho Wokwehliswa Isithunzi e-UAE
Ungalwa Kanjani Nezinsolo Zobugebengu Bamanga Ezinkantolo Zase-UAE
Umthetho Wezinsolo Zamanga Nezinsolo e-UAE
Icala Lobugebengu Lokumangalelwa Kwamanga e-UAE
Ngeshwa, inkantolo ingakubeka icala futhi ikuthole unecala ngobugebengu noma amacala ongawenzanga. Ungamangalelwa ngamanga nganoma yiluphi uhlobo lobugebengu, okuhlanganisa ukubulala, ukushaya, ukudlwengula, ukweba, nokushiswa kwempahla. Ngokuvamile, ukumangalelwa okungamanga kubangelwa ubunikazi obuyiphutha, izinsolo ezinonya, ubufakazi obudukisayo noma obungalungile bomthetho, kanye nezinye izinhlobo zokungaziphathi kahle.
Kungakhathaliseki ukuthi kungani ukumangalelwa ngamanga, kungase kukushiye uphelelwe ithemba futhi uphelelwe ithemba. Ngokuvamile, ukuphila kwakho, okuhlanganisa umsebenzi wakho, ukuphila komkhaya, nedumela, kusengozini. Ukwengeza, uzibeka engcupheni yokuboshwa, izinhlawulo zemali ezinkulu, nezinye izinhlawulo ngento ongayenzanga.
Okubi nakakhulu, ngokuvamile abukho ubufakazi obucacile obunganciphisa ukumangalelwa ezimeni noma ezimeni lapho ukumangalelwa okungamanga kuvame khona, okuhlanganisa udlame lwasekhaya namacala okuhlukunyezwa ngokocansi emsebenzini. Empeleni, ungase udinge okungaphezu kweqiniso lapho ulwa nezinsolo zobugebengu ezingamanga.
Ngaphandle kokuqasha ummeli wokuvikela ubugebengu onekhono nonamava, kunezinyathelo ongazithatha ukuze uzivikele lapho ubhekene nokumangalelwa ngamanga.
Izinyathelo noma amasu ongawasebenzisa ukulwa nokumangalelwa ngamanga ahlanganisa:
a) Cela inselele Ukwethembeka Kommangaleli/Kufakazi
Ngeshwa, abaningi abamangaleli ku amacala okumangalelwa ngamanga babe nezinhloso zangasese, lapho behlose ukuzuza okuthile ngezindleko zakho ngokuqamba amanga enkantolo. Kusukela kubalingani abahlukene abafuna ukugcinwa kwezingane noma ukusekelwa komngane womshado kuya kubasebenzi abanonya abafuna isinxephezelo ngokuhlukumeza emsebenzini okungamanga, ngokuvamile kunamathuba okuba amanga ekumangaleleni okungamanga.
Kufanele uhlose ukusola ufakazi njengelinye lamasu okulwa nokumangalelwa okungamanga. Ukusola ufakazi kuhlanganisa nokwethula ubufakazi obubeka imibuzo yokwethembeka kommangaleli. Ngokuvamile, ummangaleli/ufakazi angaba nomlando wokuqamba amanga. Wena kanye nommeli wakho nidinga nethula ubufakazi obubenza bangathembeki phambi kwenkantolo.
Ukuphonsela inselelo ukwethembeka kommangaleli kuyilapho ubonisa ukuthi unenhloso ecashile ekwenzeni amanga ngawe kungasiza ukufakazela ubumsulwa bakho.
b) Qoqa Ubufakazi Obuningi Ngangokunokwenzeka
Ngaphandle kokukhombisa inkantolo ukuthi ummangaleli akabanga neqiniso ngamacala abo, udinga ukuqoqa ubufakazi obusekela uhlangothi lwakho lwendaba. Akumele ulindele ukuthi umshushisi noma amajaji angabaze ukwethembeka kukafakazi ngaphandle kobufakazi obusekela izimangalo zakho.
Njengoba indaba ngayinye inezinhlangothi ezimbili, udinga ukweseka uhlangothi lwakho lwendaba ngokwethula ubufakazi bakho. Kufanele uvume ukungathi sína kokumangalelwa futhi uqale ukuqoqa ubufakazi obuphathekayo, okuhlanganisa nemibhalo, ngokushesha nje lapho uqaphela izinsolo.
Isibonelo, ekumangaleleni okungamanga okubandakanya ukuhlukumeza ngokocansi emsebenzini, kufanele uqoqe noma yibuphi ubufakazi obungase bukusize, okuhlanganisa namarisidi, ama-imeyili, nezinye izinhlobo zezincwadi noma ulwazi. Lapho kunesidingo, kufanele ube nofakazi abangakusekela kanye nobumsulwa bakho kuyilapho befakaza ngokungaziphathi kahle kommangaleli noma izisusa ezicashile.
c) Icala eliphikisayo lokwehliswa isithunzi noma i-Libel
Ungaliphendulela icala ngokuphikisa ummangaleli wakho ngokuhlambalaza noma ukudelela. Elinye lamasu okulwa nezinsolo ezingamanga ukungenelela ngaphambi kokuthi amacala aye enkantolo, okuhlanganisa nokusongela ukuphikisa ummangaleli. Njengoba ukumangalela ngamanga kungekho emthethweni, kufanele uqhubeke umangalele ummangaleli uma ehluleka ukuhoxisa amacala.
Ikakhulu, ukumangalelwa ngamanga kuyizinsolo ezibucayi ezingacekela phansi impilo yomuntu ngokuphelele yingakho kunesidingo sokwenza konke okusemandleni ukuze uzivikele, okuhlanganisa nokuphikisa ummangaleli. Kodwa-ke, njengamanye amasu, ungase udinge ukuqasha ummeli wokuvikela ubugebengu ochwepheshe ukuze akusize uphendule amacala.
Kungani Udinga Ummeli noma ummeli wendawo we-UAE Lapho Usolwa Ngamanga Ngobugebengu
Kungakhathaliseki ukuthi icala lisesigabeni sophenyo noma inkantolo ikubeke amacala ngokusemthethweni ngamanga, udinga ukuvikela amalungelo akho. Ngaphandle kobucayi bokumangalelwa nokuba yinkimbinkimbi kwesimiso somthetho wobugebengu, ukumangalelwa ngamanga kungase kukushiye udidekile.
Ungase uzithole wenza ngendlela eyenza ibe nzima nakakhulu icala lakho, okuhlanganisa ukuxoxisana nommangaleli noma nokuba nodlame naye. Ungakwazi futhi ukuvuma ukuseshwa kwamaphoyisa noma unikeze abashushisi ulwazi oluhilelekile ngaphandle kommeli wakho.
Udinga ukwesekwa nokuqondisa kommeli onguchwepheshe kuzo zonke izigaba zecala ukuze akusize wenze izinqumo ezifanele. Ummeli uzokusiza futhi ukuthi uqoqe ubufakazi obudingekayo bese umangalela ummangaleli, uma kunesidingo. Imvamisa, ummeli wokuvikela ubugebengu angakusiza ukuthi ufakazele ubumsulwa bakho ngisho noma kubonakala sengathi konke kulahlekile.
Uma umangalelwe ngamanga ngobugebengu futhi uzizwa ungenathemba, xhumana nochwepheshe bethu babameli bokuvikela ubugebengu. Sizovikela amalungelo akho njengoba sikusiza ukuthi uqhubeke nempilo yakho naphezu kokuhlangenwe nakho okungajabulisi.
Qasha Ummeli Okhethekile Wobugebengu
Umthethosisekelo we-UAE unemithetho eqinile, ekuvikela ekusolweni ngokungafanele ngobugebengu. Vimbela ijele ngokuvikela icala lakho emacaleni okukhwabanisa, ukuhlukunyezwa ngokocansi, ukwephulwa kwemithetho yomgwaqo, ukulimala kobugebengu, ubugebengu obubhekiswe kwabesifazane, ngisho nokubulala. Thola usizo ngokumangalela okungamanga noma amanye amacala obugebengu e-Abu Dhabi, e-Dubai, nakuyo yonke i-UAE. Eyethu abameli bobugebengu abanolwazi nabameli banolwazi olubanzi Lomthetho Wokumangalelwa Kwamanga kanye Nezinsolo e-UAE futhi banikeze ukumeleleka okusemthethweni kwawo wonke amacala obugebengu.
Uma wena noma othile omthandayo emangalelwe ngamanga ngobugebengu e-UAE, udinga ummeli. Uma udinga noma yiluphi usizo lwezomthetho, xhumana Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) e Dubai.
Singomunye wochwepheshe futhi izinkampani zabameli ezingcono kakhulu e Dubai ukuhlinzeka ngosizo lwezomthetho kumthetho wobugebengu, ibhizinisi, umndeni, izindlu nomhlaba, kanye nezindaba zamacala. We ingakusiza ukuthi ulwe nezinsolo ezingamanga futhi wakhe ukuzivikela kwakho.
Sishayele manje ukuze uthole isikhathi sokuqokwa nokubonisana ngokusemthethweni nabameli bethu abakhethekile bobugebengu ku- +971506531334 +971558018669